Seenaa J/Dirribaa Kumaa-Goota garbummaa balfuun ciqilee – Kichuu
HomeAfaan OromooSeenaa J/Dirribaa Kumaa-Goota garbummaa balfuun ciqilee
Seenaa J/Dirribaa Kumaa-Goota garbummaa balfuun ciqilee garboomfataan lubbuunsaa dabarte!
Barreessaan :Musa Dawud
(Beekan Guluma) – Uummatni Oromoo eerga waanjoo gabrummaa jalatti kufeen kaasee biifa adda addaan fincila gaggeessaa turuun isaa ni beekama. Finciloota godhamaa turani fi jiran keessatti gaheen beektootni Oromoo bahaa turani fi jiran seenaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Kaabaa fi kiibba bahaa fi dhiha kutaa Oromoo huunda keessatti beektoota Oromoo saba isaaniif jeecha maatii isaanii facaasanii jireenya gadadoo jiraachaa jiraniis ta’e wareegama lubbuu baasani warra ijoolleesaanii abbaa yokaan haadha dhable taasisan seenaan Oromoo yoomu ni yaadata.
Qabsoon Oromoo biifa amma qabdu akka qabaattuu kan taasisee arsaa gotoonni kuun kaffalan ta’uu dhalootni ammaa ni hubata. Hubachuu qoofa osoo hin taane kaayyoo isaan itti wareegamaniif sana galmaan gahe gabrummaa saba isaa irraa hundeen buqqisudhaaf wareegama barbaachisaa ta’e baasaa jira. Seenaa gotowwan keenyaa kana dhalataa ganda isaan keessatti dhalatan caalaa kan beeku hin jiru kanaaf seenaa isaani barreeffamaan dhaloota dhuftuuf dabarsuun dirqama hunda keenyaa dha.
Godinni Horroo Guduruu akkuuma godinaale Oromoo biro madda gotowwani ta’u seenaatu ragaa baha. Godiina kana keessatti Oromoota achitti dhalatan qoofa osoo hin taane ilmaan Oromoo carraan qabsoo naannoo sana isaan geessite heeddutu akka bahaniin hafan. Kanaaf gotoota Oromoo J/Milkeessaa Gadaa fi J/Faariis Hirphaa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda’ama. Abishee Garbaa fi Dhugumaa Jaldeessoos falmii haadhooftuu weerartuu waraana Minilik dukaa taasisaniin warra sabaaf jeecha wareegame. Sana boodas jaallan akka Dirribaa Kumaa, Araarsaa Assabaa, Abbaa biyyaa (Bayyanaa Obsi), Shorshoraa fi kanneen biro dhibbootaan lakkaahaman xurree abbootiin isaani saaqan irratti loltoota wayyaane kuffisee warra kufe. Seenaa gabaabduu hardhaa keessattiis seenaa J/Dirriibaa Kumaa walumaan haa ilaallu.
Diribaan ilma qotee bulaa ture. Bara 1958 (ALH) tti abbaa isaa Obbo Kumaa Waaqoo fi haadha isaa aaddee Marartuu Tochee irraa godina Horroo Guduuruu ganda haroo shooxee kesstti dhalate. Umuriin isaa barnootaaf akka gahetti barnoota isaa 1-8 tii mana barumsaa sad 1ffaa shamboo keessatti, 8-12 ammoo magaalaa naqamteeti baraatee xumure. Sana booda leenjii barsiiauma fudhatee hojiitti boba ‘e.
Dirbaan bara 1983 (ALH) magaalaa arjoo awuraajaa irraa gara magaala Shaambootti jijjiirame mana barumsaa sadarkkaa lammaffaa Shaamboo keessatti dalagaa isaa eegale. Bara sana qabsoon ABOtiin hoogganamu yeroo itti ija horate waan tureef Dirribaaniis akka qaroo oromoo tokkootti qooda keessaa fudhachuu eegale. Keessattuu dargaggoota Oromoo maandheen ijaaree barnoota siyaasaa akka isaan argatan gochaa ture. Eerga ABO chaartara keessaa baheen booda J/Milkeessaa Gadaa naannoo sanatti bobbaafame ture. Motummaan wayyaanees goota kana dhabamsisuuf yeroo itti naannoo sana xiyyeeffannaa adda ta’e jala gashite socho’aa turte. Bara sana namni siyaasa ABOn shakkame kaampiilee wayyaane Ma’igamaa fi Waradaa jiranitti hidhameetu hiraarfama ture. Akka duri mana poolisaa fi wayn bet tti nama hidhuun hafeera jechuun ni danda’ama. Wayyaanoonni toftaa kanatti dhiimma bahudhaan ummata shororkeessite gargaarsa jaalleewwan dagala jiran irraa kutu dalagaa tokkoffaa godhatte socho’aa turte, amma ta’ees itti milkoofteetti jechuun ni danda’ama. Diribaan amala shororkeessaa wayyaaneef haarka kennuu diduun humna ABO J/Milkeessaa Gadaan durfamaa tureef dirmannaa fi gargaarsa barbaachisaa ta’e goota kennaa ture. Gochaansaa gotummaan gutame kuun hawaasa biratti jaalala guddaa akka inni horatu yeroo isa taasisu wayyaanotaa fi jaleewwan isaani biratti ammoo akka diina tokkoffaatti akka ilaalamu fi adamsamu isa taasise.
Waraanni wayyaanee nama Fisehathe jedhamuun hoogganamaa ture bobbaa walirraa hin cinnee J/Milkeessaa Gadaa fi jaallewwan isaa irratti bobbaase. Waraanni jaal milkeessaas bobbaalee kana toftaa adda addaan dura dhaabbate fashalsaa turuus dhuma irratti haarka dinaa irratti waregamee, jaal Araarsaa Assabaa ammoo haarka dinaa keessa gale. Waraana hafees carraan faca’uu mudatte. Kuun wayyaanotaa fi ayyaanlaallatootaaf injifannoo guddaa, sabboontoota naannoo sanaaf ammoo gadda humnaa oli ture. Wayyaanoonni reenfa jaal Milkeessaa galma magaala Shaamboo (aka adaraash) keessa kaahani haalkan gutuu dhichisaa bulan. Manni keenyi galma kanatti dhihoo waan tureef dhichiisa isaani haalkan sanaa sammuu ijoollummaan na keessatti katabame haafe. Barsiistoonni dhalootaan Oromoo ta’ani dinaaf dalagaa tuuran (kan ammaaf maqaa dhahuun hin barbaachisne) reenfa J/Milkeessaa irra dhaabbatani tigroota dukaa suraa ka’aa akka tuuraniis bulchaa magaalaa Shaamboo yeroosi kan ture fi kan ija isaan arge Obbo Dassaalegn Jur’aa namootatti akka hime nan yaadadha.
Dinaaf gadi jechu diduun Dirribaa kan boqqoonnaa isa dhowwate hoogganaan OPDO Yaaddeessaa jedhamu fi jala deemtoonni isaa Diribaa yeroo dhumaaf dalagaa irraa darbuuf shiira xaxuu jalqaban. Bakka inni hin jirreetti waajiira isaa cabsani meeshaa mana barumsaa eerga saamaniin booda isa qabuuf gara mana isaa deemani. Dallaa isaa seenanii akka gaaffiif barbaadamu yeroo itti himan “ofumaa jalqabdan ofumaa fixaa, dirreenis tabaataanis kessan. Animoo tasa kubbaa keessan akkaa hin taanee beektaa” jedhe dallaa qe’ee isaa keessaa muka luqqifatee moraa keessaa isaan arihe. Gootummaan isaa kuni hidhaa san booda dhufe irraa isa hambisu baatuus magaala Shaamboo keessatti bal’inaan haasa’amaa ture. Diraamaa kana xaxuu keessatti gahe guddaa kan xabate nama yeroo sana waardiyyaa mana barumsaa ture amma kan taaytaa guddaa qabu fi yeroosii kaasee amma hardhaatti ilmaan oroomoo dabarsee diinaaf kennaa nama jiru dha. Xaxaa dinni xaxeen eerga hidhaan gidirfame booda waggaa tokkoof dalagaa malee akka taa’u taasisam.
Guyyaan isaa 8/05/87 guyyaa kessaa sa’a 5 ture. Guyyaa itti Dirribaan yeroo dhumaaf WBO tti makamuuf murteeffate, guyyaa itti Dirribaan daa’iman isaa babbareedduu afuur abbaa dhable taasise falmaa wareegamuu filate, guyyaa itti akka holaa harkifamani hidhamuun obsa keessaa fixe ture. Guyyaa kanatti Dirribaan dhiimma dhunfaaf manaa bahe gara magaalaatti imala eegale. Magaala dhufuuf kaampi wayyaanootaa Ma’igamaa tti argamu biira darbuun dirqama ture.Akka bakka kana gaheetti wayyaanootni kaampi keessaa bahani qabuuf itti marsan. Inniis hidhaan waan itti hadhoofteef utaalee gidduu isaani keessaa bahuun dhukaasa isarratti baname keessa figaa dallaa manneen jireeenyaa heeddu irra utaaludhaan karaa naannoo sheelii jedhamee beekamun miliqe. Dirribaan manaa bahe achumaan hafuuf karorfate yokaan itti qophaahe manaa hin baane. Haati manaa isaa mucaa isaani ishe dhumaa erga deesse reef baati jaha ture. Miliquusaa eerga mirkaneeffateen booda karaa cabsate gara mana isaatti deebi’ee ijoolleesaa yeroo dhumaaf adda dhungate mehsaa yeroo rakkoof gad kaayyate fudhachuu akka qabu hubate. Akka mana gaheen waan umame maati isaaf ibsuuf yeroo gahaa hin arganne, ijoolleensaas itti rarra’ani abbaa abbaa jechuun lukasaatti maramani himimmaan robsaa gaggeessaa dirqamaa godhaniif. Inniis wayyaanoonni akka dhufan waan hubateef suuta sossoobee of gadhisisee mucaasaa baatii jahaa bakka cistuutti adda ishe dhungate meeshaa qabu butatee bahuuf osoo qophaahaa jiru wayyaanoonni dallaa isaa cabsani waan seenaniif karaa boroo bahe imala isaa dirree qabsoo taakkuu tokkoon eegale.
Hidhaan gidiirfamuun kan haarka haarka isatti jedhe gootichi Oromoo J/Dirriibaa Kumaa figichaan isaa kuun yeroo dhumaaf maati fi ijjoolleen isaa hunda caalaa jaallatu irraa akka adda isa baasu fi bakki isaaf malu daggala Oromoo seenee qabsoo fininsuu qoofa akka ta’e hubate humna faca’aa ABO yeroo sanatti godina Horroo Guduruu keessa socho’aa turettiis nagaan dabalame.
J/Dirriibaan dirqama addaa fudhate naannoo magaala Bishooftuutti bobba’ee osoo jiruu guyyaa 10/09/91 ALH haarka dinaa keessa sene.Sana booda mana hidhaa ma’ikalaawwitti waggaa lamaaf ji’a afuriif eerga hidhameen booda manni murtii bilisaan gad lakkise. Garuu polisiin Oromiyaa ‘gaaffii addaa qabna’ jechudhaan qabanii mana hidhaa magaala Naqqamteetti hidhan. Bara kana wayyaanoonnii dhiimma Ertrea irratti bakka lamatti qoodamani rakkoo guddaa keessa seenani ture. Rakkoo kana keessaa bahufiis OPDO akka haaraatti jajjabeessuuf nama isaani amanamaa ta’e Abbaa Dulaatiin waraana keessaa baasanii mataa OPDO gochuuf yerootti dhama’aa turan ture. OPDOniis kana galmaan gahuuf barattoota University baha wallaggaatti argaman Naqqamteetti sassaabdee maqaa marii jedhuun yeroo rakkisaa turte ture. Barattoonni walgahi wayyaanee kana irratti argamaniis sodaa tokko male waltajjiima wayyaaneerratti dirgoo baratotaaf kaffalamaa ture irraa $1000 sassaabudhaan Dirribaa fi ilmaan Oromoo siyaasa ABO tiin himatamani mana hidhaa Naqamtee keessatti hidhamani jiran akka gargaarruu taasisame. Maallaqa kana qabannee yeroo jaallan kana dubbisuuf deemneetti J/Dirriibaan torcharaan baayyee akka midhame jiru nuuf ibse ture.
J/Diribaan hidhaa isaa xumurate lakkifamuus midhaa mana hidhaatii irraan gahaa ture irraa kan ka’ee gaafa 15/7/97 addunyaa kan irraa du’aan boqate. Du’a J/Dirribaatiin kan gadda guddaaf saaxilamte haati manaa isaa aaddee Yashumneeshiis gaafa 12/08/2008 ijoolle afuur facaaste du’aan addunyaa kana irraa boqootte.
Musa Dawud (Barreessaa)